Maxaa iska baddeli doona doorashada Koonfur Galbeed? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxaa iska baddeli doona doorashada Koonfur Galbeed?
Guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ayaa shaaciyey 5 kursi, oo dhawaan la qabanayo doorashadooda, kuwaa oo ka tirsan gollaha shacabka, waxaase laga cabsi qabaa hannaanka ay ku soo idlaan doonaan.
BAYDHABO, Soomaaliya- Maamulka koonfur galbeed ayaa shaaciyey in ay qaban doonaan, doorashada kuraas ka tirsan aqalka hoose, xilli walaac laga muujinayo habka loo maamulayo doorashada kuraastaas, maadaama maamulka lagu tuhmayo, caddaalad darro.
Kuraasta la qabanayo doorashadooda ayey sumadoodu kala tahay, Hop-085, Hop- 046, Hop-184, Hop- 156, iyo Hop- 176, waxaana toddobaadkan laga shaqeynayaa dhamaan waxyaabaha suura galinaya in ay qabsoomaan taariikhda loo asteeyey oo ah, 19-ka bishaan Janaayo.
Guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed, ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey, in doorashada ay de-dejin doonaan, si ay ugu soo idlaato jadwalkii loo qorsheeyey, ee ahaa 25-ka bisha Febraayo.
Haddaba kuraastas iyo dadka ku baratamaya, ma heli doonaan nidaam daah- furan, oo ka madax banaan eex iyo wax isdaba marin?
Qubrada falanqeeya siyaasadda, ee aan weydiimahaas hor dhignay, ayaa shaki ballaaran galinaya, in dhamaan kuraastaas ay doorashadoodu ku qabsoonta hab caddaalad ah, iyagoo sababtana ku sheegaya, maamulka oo aan u diyaarsaneyn, in gobolka ay ka dhacdo doorasho la mahdiyo.
Walaac badan ayey ka muujinayaan, in Lafta-Gareen, iyo maamulka uu marajaha u hayo, ay qabtaan doorasho, aan u xaglineyn cidna, maadaama si weyn looga dharagsan yahay in guddiga doorashooyinka maamulkaas, uu xiriir hoose la leeyahay hoggaanka waqtigiisu dhamaaday.
Cabdicasiis Lafta-Gareen, ayaa ah weli, nin ay maskaxda ka heystaan kooxda fadhisa madaxtooyada, waana shakhsi u nugul fulinta qorshe walba oo uga yimaada Villa Soomaaliya, taasoo caqabad ku noqon karta qabsoomida doorasho daah-furan.
Doorashada aqalka hoose, ee ka dhaceysa Koonfur Galbeed, waa tan qura ee go'aamin karta, in ay wax iska baddaleen, hannaankii boobka ku sifeysnaa, ee ay ku socdeen doorashooyinka, ka hor inta aysan gollaha wadatashigu yeelan kulan dib loogu saxayo, doorashada gollaha shacabka.